Ebunjiniyela be-software, ubunjiniyela, iphethini yokwakheka kwesoftware iyisisombululo esijwayelekile, esisebenzisekayo senkinga evame ukwenzeka ngaphakathi komongo inikezwe ekwakhiweni kwesoftware. Akuyona iphethini eqediwe engaguqulwa ngqo ibe ngumthombo noma ikhodi yomshini. Esikhundleni salokho, yincazelo noma isifanekiso sendlela yokuxazulula inkinga engasetshenziswa ezimeni eziningi ezihlukile. Amaphethini wokuqamba enza izinto ezihlelekile okuhlelekile ongazisebenzisa umxazululi ukuxazulula izinkinga ezivamile lapho kuklanywa isakhiwo noma uhlelo. Amaphethini wokuklanywa okwenzelwe ...
Helsinki ingumuzi aseFinland ngobukhulu nenhloko-dolobha yalo. Kukhona iphile mayelana 629 512 izakhamuzi. Imizi yalo engumakhelwane kukhona Vantaa, Espoo futhi Porvoo. ITampere, idolobha lesibili ngobukhulu laseFinland, lisendaweni engamakhilomitha angama-180 enyakatho neHelsinki.
isiSwidi: Finland izwe laseYurophu. IsiQongo saseFinlandi IHelsinki Helsinki futhi idolobha lesibili ngobukhulu iTampere Tammerfors Izilimi isiFinlandi
elikhulu kunawo wonke eFinland. Omakhelwane balo yiVihti, Nurmijärvi, Vantaa, Helsinki Kirkkonummi, noKauniainen ngaphakathi kwe - Espoo. I - Espoo yidolobha elikhulu
32.9 ITorshavni Tórshavn IFinlandi 337, 030 5, 183, 545 15.4 IHelsinki Helsinki IGernseyi 3 78 64, 587 828.0 St. Peter Port I - Ayisilandi 103, 000 279
Sari A. Collection of User Interface Design Patterns University of Helsinki Dept. of Computer Science. Kulandwe ngomhlaka 2008 - 01 - 31. Heer, J.. Software